दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सुरू « Sthaniya Khabar
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सुरू
प्रकाशित मिति : १४ असार २०७४, बुधबार ०२:२२
काठमाडौँ । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन आज प्रदेश नं १, ५ र ७ मा हुँदैछ । यस निर्वाचनका लागि ६२ हजार ४०८ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् भने ४१ जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म हुने निर्वाचनका लागि आठ हजार ३६४ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्य चयन हुनेछन् ।
निर्वाचनमा ६४ लाख ३२ हजार ७६५ मतदाताले मतदानमा सहभागी भई १५ हजार ३८ प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछन् । यसका लागि देशभर चार हजार ५८१ मतदानस्थलमा आठ हजार ३६४ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । मतदानमा सुरक्षाकर्मीबाहेक ६६ हजार ९०० कर्मचारी खटिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी र सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएकाले ढुक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा गत वैशाख ३१ मा निर्वाचन भएको थियो भने प्रदेश नं २ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा आगामी असोज २ गतेका लागि तोकिएको छ । रासस
नयाँ पर्यटन ऐनप्रति सरोकारवालाहरूको असन्तुष्टी
नयाँ बन्न लागेको पर्यटन ऐनप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टी जनाएका छन् । खासगरि पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रका साना
गाउँपालिकामा संसदीय अभ्यास
सल्यानको त्रिबेणी र र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले संसदीय अभ्यासको कार्यशाला सम्पन्न गरेका छन् । दुबै
सुस्ताबासी भन्छन्ः झोलुङ्गे पूल चाँडो बने सुखका दिन आउँथ्यो कि !
नवलपरासी । भारतले सीमा मिचेर हैरानी खेपिरहेको गाउँपालिका हो, सुस्ता । गाउँपालिकाको वडा नं. ५
कुन पौष्टिक तत्वले के फाईदा गर्छ, जानिराखौँ
काठमाडौं । हामीले दैनिक रुपमा साँझ बिहान खाने खानाबाट भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिजजस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छ
फलफूल किन्दा होसियारी अपनाउँ, हानिकारक बिषादी हालेको हुनसक्छ
काठमाडौं । अचेल बजारमा हेर्दै खाउँखाउँ लाग्ने आँप, स्याउ, मेवा, केराजस्ता फलफूल पाइन्छ । हामीले
कुन खाद्य वस्तुमा कुन पौष्टिक तत्व पाइन्छ, जानिराखौँ
काठमाडौं । हामीले दैनिक रुपमा खाने खानाहरूबाट कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, प्रोटिनजस्ता पौष्टिक तत्व पाइन्छ भन्ने कुरा